by admin May 2, 2019 May 2, 2019 Leave a Comment on DASTUURKA CUSUB PDF
Author: Samugrel Shakataur
Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1. Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Soddon 30 maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko. Garsoorku waxa uu awood gaar ah u leeyahay: Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa ku daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub.
Qodobka 60aad-Qaybinta Awoodaha 1 Dowladda federaalku waxa ay awood u leedahay in ay Jamhuuriyada Soomaliya oo dhan u samayso sharciyo maamul-wanaagga ku dstuurka, iyadoo raacaysa xuduudaha Dastuurka iyo awoodaha maamulidda sharciyadaas. Hay’adaha Dawadda ee Gaarka ah. Marka uu hawshii loo doortay u gudan kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo.
Madaxweynaha waxaa uu xilka la wareegay kii. Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka.
Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa marka uu Madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan Dastuurka.
Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gaashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay. Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada.
Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey; j. Muddada xiIka ee Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waa 5 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka bo dhaariyo.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya. Sidaa darteed, cashuur ama takaaliif aan xeer jidayn lama qaadi karo. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Si ay u suurta gasho qaban-qaabinta Aftidu, waxa waajib ah in la soo saaro Xeerka Aftida iyada oo laga shiidaal-qaadanayo tilmaamaha Dastuurku asteeyey; waxaana la magacaabayaa guddida qaban-qaabinta Aftida si waafaqsan Dastuurka.
Madaxweynaha, ka dib marka uu la tashado Golaha Xukuumadda. Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka Somaliland 26kii Juun k iyo ka hor, waxa loo aqoonsanayaa muwaadin Somaliland. Fulinta xeerarka chsub Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Haddii ay Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha isku hal mar ku dastyurka xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad, waxa xilka Madaxweynaha si ku meel gaadh ah u haynaya Guddoomiyaha Golaha Guurtida.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dastkurka. Hantida guud ee lahaanshaheeda ama ka faa’iidaysigeeda loo baahdo in Ia wareejiyo waxay ku wareegi kartaa si xeerka waafaqsan. Kala Diridda Golaha Wakiilada. Legalizing Stolen Fish December 28, Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa qeexaya hab-socodka mashruuc-sharci, waana in uu muujiyaa mudnaanta gaar ah ee ay Ieeyihiin mashruuc-sharciyada la xidhiidha maaliyadda iyo kuwa Xukuumaddu u aragto degdeg, kuwaas oo mudan in iyaga la hormariyo.
Maxamadaha Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka kooban yihiin: